Taylor Swift ရဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taylor Swift : The Swift Life! – AsiaApps
Taylor Swift Fan တွေ Download ဆွဲဖို့သာပြင်ထားပါတော့!
ကမ္ဘာကျော် Pop-star တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Taylor Swift ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ “The Swift Life” အမည်ရှိတဲ့ Application ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူ့ရဲ့ ချစ်လှစွာသော Fan တွေဖြစ်တဲ့ Swifties လေးတွေနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးဖို့ပါ။ Swifties လေးတွေနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးအောင် Social Network ကြီးကြီးတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်တာလို့ဆိုရမှာပါ။
App Store မှာပဲရောက်ရှိသေးတာဖြစ်လို့ IOS user တွေပဲ အသုံးပြုလို့ရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Swift Life App ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် Taylor နဲ့ သူ့ကြောင်လေး ဆော့ကစားနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ Album အတွက်ပြင်ဆင်နေပုံ၊ ဘယ်ရောက်/ဘာလုပ် အစရှိတဲ့သတင်းတွေကို ပထမဉီးဆုံး တိတိကျကျသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့တပြေးညီ တစ်စုတစ်စည်းတည်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကုန်လည်းသက်သာစေမှာပါ။
ဒီ App မှာမိတ်ဆွေက Taylor ရဲ့ Post တွေကိုသာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိနေတဲ့ Swifties တွေရဲ့ Postတွေ၊ Reaction တွေကိုပါတွေ့မြင်ရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Swfties တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေဘက်ကလည်း Post တွေတင်နိုင်ဉီးမှာပါ။ အဲ့တာကြောင့် အခြားသော Swifties လေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးခွင့်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
#TheSwiftLife is now available WORLDWIDE for free in the @AppStore! ??
Download it here: https://t.co/OAy6IIBrsx pic.twitter.com/YmKLILjFsk
— Taylor Nation (@taylornation13) December 16, 2017
ဒါ့အပြင် Taymojis တွေကိုပါအသုံးပြုနိုင်ဉီးမှာပါ။ Taymojis ဆိုတာကတော့ Taylor Swift ပုံကို Animated လုပ်ထားတဲ့ 3D Sticker လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Taymojis တွေကို Swifties လေးတွေအချင်းချင်းဆက်ဆံရာမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ App Store ပေါ်မှာ Free Download နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ Bias က Taylor Swift ဆိုရင်တော့ အခုချက်ခြင်းပဲ Download ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါပြီ။
1 thought on “Taylor Swift ရဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taylor Swift : The Swift Life!”
Ah Wu Mee says: